लकडाउनमा पनि जनताको सेवा गर्न बिहानै डिउटी हिडेकी नर्सलाइ एम्बुलेन्स ठ,क्क,र दिंदा घ,टनास्थलमै निधन ! – " सुलभ खबर "
लकडाउनमा पनि जनताको सेवा गर्न बिहानै डिउटी हिडेकी नर्सलाइ एम्बुलेन्स ठ,क्क,र दिंदा घ,टनास्थलमै निधन !
कोहलपुर नगरपालिका–११ मा रहेको होटल अतिथि अगाडि एम्बुलेन्स र मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किँदा एकजनाको निधन भएको छ । निधन हुनेमा मोटरसाइकलमा सवार कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया शोभा भट्ट रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ ।
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरबाट नेपालगञ्जतर्फ आउँदै गरेको भे१च ८२४ नंको एम्बुलेन्स र से५प ४८४ नंको मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएका थिए । मोटरसाइकल चालक नरहरिनाथ गाउँपालिकाका द्वन्द्वविक्रम विष्ट गम्भीर घाइते रहेको कोहलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले जानकारी दिनुभयो । एम्बुलेन्स चालक बारबर्दिया नगरपालिका–६ का रामबहादुर थारू भने सामान्य घा,इ,ते भएका छन् ।
साथै हाल बिश्व्भर म,हा,मारीका रुपमा फै,लि,एको कोरोनाका भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यालय आउने सिलसिलामा भएको निधनले हाम्रो गाउँपालिकालाइ अपुरणिय क्षति भएको छ । उँहाको असामैक निधनमा दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना । उक्त घटनाका घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ महेन्द्रजंङ शाही / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत